तिवारीका हत्यारालाई कारबाही नगरे देशै ठप्प बनाउँछौँः राजीव पहारी - Pahilo News
तिवारीका हत्यारालाई कारबाही नगरे देशै ठप्प बनाउँछौँः राजीव पहारी
युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या के कारणले भएको ठान्नु हुन्छ ?
तिवारीको हत्या राजनीतिक कारणले भएको हो । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौममिकता र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई बचाई राख्न चाहने तिवारीलाई देशलाई विखण्डन गर्न खोज्ने तत्वहरुले हत्या गरेका हुन् । उहाँ राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई बचाई राख्न सतिसालझैं उभिँदै आउनुभएको थियो ।
प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग तुल्याउनु हुँदैन भन्दै विगत केही हप्तादेखि रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा ठूलो जनसागर उर्लिएको छ । रुपन्देहीको आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो । जसका कारण विखण्डनकारी, विभाजनकारी प्रवृत्ति बोकेका र त्यही सोच भएका केही व्यक्तिहरुद्वारा उहाँको हत्या भएको हो ।
उहाँको हत्याप्रति युवा संघ घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । उहाँको हत्या भएको २१ घण्टा बितिसक्दा पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन र समात्न सकेको छैन । युवा संघले आजै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर अपराधीलाई कारबाही गर्न भनिसकेको छ ।
सरकारले छानविन आयोग गठन गरिसकेको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु आन्दोलनमा जानु हुन्छ ?
युवा संघले आज पाँच बजेभित्र आयोग गठन नगरे आन्दोलनको आँधीबेहोरी ल्याउने चेतावनी दिएको थियो । युवा संघले चेतावनी दिएलगत्तै एआइजी विज्ञानराज शर्माको नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन भएको छ ।
तपाईहरुकै दबाबपछि गृहमन्त्री छानविन आयोग बनाउन बाध्य भएका हुन त ?
हामीले गृहमन्त्रीलाई तीन वटा कुरा भनेका थियौँ । पहिलो, हत्याराहरुलाई तत्काल समातेर कारवाही गर्नुस् । दोस्रो, यस्तो परिस्थिति आउनुको दोषी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री (तपाईँ) हो । तपाईँहरुका उत्तेजक अभिव्यक्तिले यस्तो घटना भएको हो भन्यौँ । अझ हामीले उहाँलाई ‘तपाईँहरुका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सद्भाव भड्किएको छ’ भन्यौँ । उहाँलाई हामीले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहोला समेत भन्यौँ । मनोज पुन वा अरु–अरुतिर लगेर यो घटनालाई तोडमोड गर्ने काम भएको छ भनेर हामीले गृहमन्त्रीलाई सजग तुल्यायौँ ।
यो शृंखलाबद्ध घटना हो । केही दिनअघि पनि बुटवलमा एक जना व्यवसायीको हत्या प्रयास भएको थियो । हामीले गृहमन्त्रीलाई ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भनेर चिन्ता भएको भन्दै प्रष्ट भन्यौँ ।
तिवारी हत्याकाण्डमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई दोषी ठह¥याउनुभएछ । कस्तो थियो उहाँको प्रतिक्रिया ?
उहाँले ‘तपाईँहरुका भनाइ सान्दर्भिक छन्, गृहमन्त्रालय हत्यारालाई जसरी पनि पत्ता लगाउने गरी अघि बढ्छ’ भन्नुभयो । उहाँले आज बेलुका पाँच बजेभित्र छानविन समिति गठन गर्ने भन्नुभएको थियो । गठन गर्नुभएको छ । हेरौँ, उहाँले कस्तो कदम अघि बढाउनु हुन्छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढ्छौँ । उहाँले अनुसन्धान, जनपद सशस्त्रका प्रमुखलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । मलाई लाग्छ, उहाँले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुने छैन । उहाँले सामान्य रुपमा लिनु भयो भने त्यसको नराम्रो मूल्य उहाँहरुले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन भने युवा संघले कस्तो कदम चाल्छ ?
युवा संघले आज लुम्बिनी बन्दको घोषणा नै गरेको छ । देशव्यापी रुपमा दिउँसो एकदेखि दुई बजेसम्म चक्का जामको पनि आयोजना गरेको छ । आज उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नभएको भए देशैभरि साँझमा राँके जुलुस निकाल्ने र भोलि नेपाल बन्द गर्ने तयारी थियो । सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ । अब सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यही अनुरुप युवा संघले कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।
अर्कोतिर, आजै मेरो नेतृत्वमा युवा संघका पाँच जना पदाधिकारी बुटवल जादैछौँ । आजै हामी पीडित परिवारलाई भेट्दै छौँ । सम्भवतः भोलि उहाँको दाहसंस्कार हुनेछ । समग्रमा भन्दा सरकारको कदम हेरेर हामी रणनीति बनाउँछौँ ।